Haulm Kuuraya MuMbatatisi Muna 2021: Ndezvipi Izvo Zvisarudzo - Potatoes News
Haulm kuuraya mumatezi muna 2021: Ndedzipi sarudzo?
In mbeu mbatatisi, haulm kuuraya kunotanga muna Chikunguru. Reglone naFinale havacha bvumidzwa kuuraya kwemakemikari matapiri. Inobhadharwa neArable Farming Sector Organisation kuburikidza nePlant Health Action Plan, Delphy akaita ongororo mune dzimwe nzira uye nzira muna 2019 na2020.
Mushure memakore maviri ekutsvagisa, zviri pachena kuti maitiro anofanira kunge achikwanisa kubata nemamiriro ezvinhu aripo neruzivo rwakanaka rwechokwadi. Nekudaro, inononoka ine chete yakazara-munda kurapwa.
Kungo pfapfaidza minda izere
Kunze kwekuzadzisa chiyero chakaringana uye kumisa hutachiona hwehutachiona nehutachiona, kuuraya kwemashizha nekukurumidza kwakakoshawo kudzikisira njodzi yekukanganiswa kwetubers nezvirwere zvehutachiona senge Erwinia nePhoma.
Spray mashedhi akasaswa neakajairwa sprayer neKutsvaga uye Spotlight Plus uye yakakwira pfapfaidzo vhoriyamu yakafananidzwa mukuyedza kuEmeloord nerutsigiro rwemhepo uye WingsSprayer ine yakaderera spray vhoriyamu. Mamiriro ezvinhu panguva yekupfira aidziya neiyo yakaderera RH. Zvakawanikwa kuti pasi pemamiriro aya huwandu hwekupfapfaidza hwakashanda zvakajeka kupfuura huwandu hwekupfapfaidza: 385 l / ha yaive yakakwana, 215 l / ha yaive yakadzika kwazvo.
Chati yekutanga pazasi inoratidza zvinoitika padanda rekudzoka. Magazini yakapindura zvakafanana. Iyo shoma vhoriyamu yekushanda chaiko haigone kutsanangurwa, sezvo zvinoenderana nemamiriro ezvinhu. Kurongeka kweSpotlight uye Kukasira muchirongwa chekumwaya kwakange kusingaite. Kana mapiritsi ane maviri ekukurumidza uye imwe Spotlight isingashande zvakakwana, zvinokwanisika kuita imwe pfapfaidzo neAffinity Plus.
Muchidzidzo, hapana kumwaya kwakaitwa pazvinhu zvemuchina pamberi pekupeta kumisa chirimwa. Izvi zvakatitendera kuti tione zviri nani misiyano pakati pezvinhu. Mumagirafu maviri pazasi, zvinogona kuoneka kuti misiyano yakanga yakakura musi waNyamavhuvhu 6 (mazuva masere mushure mekurapwa kwekutanga) asi yakanga yatobatsirwa naAugust 17 (mazuva gumi mushure mekurapwa kwekupedzisira). Kupfapfaidza kwakatarisa ipapo mushure mekurohwa (orenji mutsetse) yakashanda nekukurumidza zvakanyanya nekuda kwemamiriro akanaka. Mitsetse yezvimwe zvinhu ingangoenderana.
Mushure mekumwaya kwekutanga kumisa goho, zviri nani kudhonza mashizha. Panzvimbo yechipiri kuburitsa hurafu uye chechitatu kuenderera nekuzadza-munda kumwaya. Kumwaya-munda wakazara kunogona kuwana mukana wekuti ivhu haribatanidzwe pamamita matatu ega ega uye njodzi yemvura iri pakati pemakomba inodzivirirwa. Pakati payo, haulm kurovera inoshanda nekukurumidza kupfuura kungozadza-munda kumwaya. Nokubatanidza haulm ichirova neSpotlight kupuruzira neHaulm-Inoita, yakazara-munda kupuruzira inoponeswa.
Mhedziso uye mazano
Minda yakazara chete:
Tanga pakutanga nekuuraya kunouraya.
Tanga neKukurumidza kana Spotlight Plus.
Chinja huwandu hwekupfapfaidza kumamiriro acho. Pane yakaderera RH uye nekukurumidza kubuda kwemadonhwe ekupfapfaidza, huwandu hweinosvika 400 l / ha inodiwa.
Iva nechokwadi chekudya kwakanaka, munguva yekunaya uye yegore, mbatatisi yembeu inogona kumwayiwa manheru. Nekuda kwenguva yakareba yemasikati muzhizha, kuvhiya kunenge kwakanaka.
Kana zvichidikanwa, pfapfaidzo yechina inogona kuitiswa neAffinity Plus.
Mushure mekumwaya kumisa chirimwa:
Haulm inoputika pamwe chete kana kuteverwa neimwe kana maviri mapiritsi
Mhedzisiro yakanaka yakawanikwa pamwe nekubatanidzwa kwehaulm flaps neLoof-Do. Iyo yakaderera pfapfaidzo vhoriyamu zvakare haina dambudziko kune yakaderera RH. Mumamiriro ezvinhu akanaka, muyero weSpotlight Plus kana Quickdown unogona kudzikiswa ne25 kusvika 50 muzana.
Pre-kumera kwekutanga kwakanaka
Deredza nitrogen zvishoma
Munda wezuva mbeu mbatatisi
Pazuva remunda wembatatari yemusi wa8 Chikunguru muSwifterbant, mhedzisiro yekutsvagisa ichatsanangurwa uye varapi veDelphy vachange varipo. Kunyoresa kunodiwa nekuda kwekorona .
Loofdoding mune aardappelen muna 2021: Wat zijn de opties?
Tags: zvigadzirwa zvekuchengetedza gohokukura-mhodziChikamu chembeu yemazamuMbeu yemazamu mbatatari
Mitengo inogona kukwira sezvo varimi vekumadokero vachirwisana nekusanaya kwemvura
Sencrop inoisa 20-chiuru chemamiriro ekunze
Apical Midzi Yakatemwa Inogona Kumutsiridza Mbatata Mbeu Kugadzirwa MuIndia